Vavaka ho azy hiantso ahy ary hangataka famelana amiko. ? Ao anatin'ny 10 minitra
Vavaka niantso ahy ary angataho ny famelan-keloka fa tsy asa feno fitiavan-tena izany, satria maro ny olona tadiavina.
Fa kosa, fihetsika manafaka sy fanasitranana anaty.
Indraindray dia manana olona eo amin'ny fiainantsika izay mandratra antsika foana isika ary noho ny antony sasany ary, amin'ny maha-hafahafa toa azy, dia tsy afaka miala amin'izany isika.
Na izany aza, ity olona ity dia niafara namela ratra maro izay tsy mbola sitrana ary raha mbola tsy sitrana dia hamatotra mandrakizay isika satria ho dingana ho fiainantsika izay tsy mbola resy.
Izany no antony maha-zava-dehibe ity vavaka ity, antso iray izay misy ny famelan-keloka fa mpanasitrana dia mpanasitrana eo no ho eo ary, tsy isalasalana, ho vonona ny hanomboka isika.
Ny fananganana fiainana vaovao tsy vita famaranana dia ny fanandramana hanamboarana tranobe amin'ny sisa tavela amin'ny hafa izay tsy nahatohitra rivo-doza satria na ho ela na ho haingana dia hiafara ihany koa ilay trano vaovao. Tsy misy vavaka amin-kitsimpo atao masiaka.
1 Mivavaka lalandava ve ny vavaka miantso ahy sy mangataka famelan-keloka?
1.1 Vavaka niantsoako ahy ao anatin'ny 10 minitra.
1.2 Vavaka ho anao hitady ahy ao anatin'ny 10 minitra ka hangataka famelana
1.3 Vavaky ny famoizam-po mba hiantso ahy
1.4 Ny vavaka amin'i San Antonio mba hiantso ahy
Mivavaka lalandava ve ny vavaka miantso ahy sy mangataka famelan-keloka?
Ny vavaka voalaza amin'ity lahatsoratra ity dia miasa foana. Mila mivavaka am-pinoana fotsiny ianao.
Haseho 4 samy hafa ny olona masina samihafa. Azonao atao ny mivavaka amin'izy ireo mandritra ny andro, mba hahazoanao hery bebe kokoa.
Raha te hampitsahatra ny fijalianao dia tsy maintsy manomboka mivavaka ianao dieny izao. Ny fanampian'Andriamanitra ihany no ahafahako miantso anao haingana.
Aza mandany andro intsony, ampifanaritaho ireo fehezanteny etsy ambany!
Vavaka niantsoako ahy ao anatin'ny 10 minitra.
Tompoko, mpino mahatoky aho, izay mangataka fanampiana aminao, mangataka aminao hanome anao antso izay mety ho zava-dehibe, izay afaka mamaritra zavatra maro.
Tiako io antso io ary tsara, mitondra vaovao tsara izy io San expedito.
Ianao, ilay olona mpiambina ahy, no mitarika ilay olona handray fanapahan-kevitra ho soa ho ahy.
Folo minitra dia mety fotoana mety hahatongavan'io olona io aminao, saingy tadidio fa ny vavaka dia afaka manao ny zava-drehetra.
Fa misy tranga faran'izay kivy dia tokony hampiharina ny fepetra hentitra kokoa. Ny vavaka amin'ny antso ao anatin'ny folo minitra dia azo ampiharina amin'ny tranga maika, izay tsy misy zavatra azon'ny olombelona atao ary mbola mijanona ho mametraka ny finoantsika amin'ny vavaka iray izay tokony ho marihina.
Fantatsika fa ny fahamarinana foana hatrany ary ao amin'io fehezanteny io dia mitovy. Azo atao amin'ny fotoana rehetra ary tokony hampiseho ny finoana sy ny ilantsika rehefa mivavaka.
Vavaka hitadiavana ahy ao anatin'ny 10 minitra ary mangataka famelan-keloka aho
Ry sosy Saint-sousian malalanao, noho ny hatsaram-ponao sy ny habetsahan'ny fitahiana anao ho an'ireo izay mangataka aminao, mangataka famindram-po aho, miangavy anao aho, oh, ry lanitra, avelao ny hivavaka amiko, hitady ahy amin'ny fanahy sy ny vatana, satria mila azy aho ny fitiavana, ny fitiavanao sy ny orinasa anao, ô, San Cipriano, mahery!
Enga anie ho tonga amin'ny fahatsorana masina ataonao ny fangatahana, mila anao aho hanome ny fahagagana izay tadiavinao amiko ny fanirianao sy ny fifankatiavanao indrindra ...
Mba Tompoko, asao izy (lazao ny anarany) hitady ahy rehefa mifoha avy eo am-pandriana sy hatory indray ... satria amiko daholo io!
Malahelo ahy izy, fa tsy afaka mamorona ny fiainany raha tsy misy ny aiko ... oh, mpanohana ny olona mahatoky fa tiantsika ary mitalaho indray isika ... ataovy ilay fahaizako ivavahana, mihemotra amin'ny sainy ary hitady ahy, nanoratra izy noho ny fananako ahy ny ilany sy ny tongony mitondra azy ho eo amin'ny seza, ahita ahy izy ...
Oh, fahagagana ny fanahy izay mifoka amin'ny alahelo, omeo fiainana aho, omeo tony aho ary omeo ahy ny zavatra rehetra milaza amiko, fa ny fiverenan'ny malalako dia akaiky ...
Benemerito San Cipriano, enga anie ho tonga amiko ny fitahianao ary miaraka aminy, ilay fahagagana izay andrasako, Raiko ...
Ray masina ô! Amen.
Io vavaka io dia mahery tokoa ary tsy maintsy atao ao tranga tena maika Tsy afaka tia tena isika ary manontany raha tsy mieritreritra ny olon-kafa.
Ny fiadanam-po matetika dia miankina amina olona iray hafa, fa raha mijery tsara ao am-pontsika kosa isika dia azo inoana fa hahita fiadanam-be isika ary manantena fa haka fotoana kely ary afaka mivavaka manokana ho an'ny olona ambony indrindra.
Ny vavaka dia miantso ahy ary mangataka famelan-keloka azo atao raha mbola misy mila mitsena an'izany olona manokana izany.
Mety ho zaza izany, mpiara-miasa taloha, mpianakavy na namana tsy mbola hitantsika nandritra ny fotoana ela ary efa mila an'io fifandraisana mivantana io izay mety hahavita ihany rehefa misy olona miatrika azy.
Vavaky ny famoizam-po mba hiantso ahy
Ray malala a, matahotra aho sao holavina… Miangavy anao aho azafady (ANARAN'ILAY OLONANA) Antsoy aho ary lazao amiko ny zavatra tsapanao ho ahy, mba hanehoanao ny zavatra tsapanao rehetra.
Ary afaka faly aho fa tsy tokony havaly. Omeo hery aho hiatrehana azy tsy misy fanaintainana, fantatro fa eo anilanao aho mahavita mandresy sy miaritra izay tonga rehetra. Aza avelanao ho Dada aho, averiko fa mahery kokoa aho
Rehefa manana fisaintsainana lalandava isika dia tsy afaka ny tsy hahafantatra momba azy amin'ny fotoana rehetra satria matanjaka ny filana ary te hifandray isika saingy tsy afaka mijanona mandra-piverina any aminay, noho izany ny antso an-tariby toa izay safidy tsara indrindra.
Io indrindra no tanjon'io vavaky ny famoizam-po. Antsoina hoe satria efa loharano farany ampiasaintsika io ary mahomby ary zato isan-jato mahery.
Ny vavaka irery ihany no mitondra hery tsara ary raha io vavaka io no amboarantsika azy amin'ny finoana be, dia ho gaga ny valiny.
Eo am-bavantsika dia manana hery lehibe tokoa, miaraka aminy no ahafahantsika manangana na manimba. Izany no antony tokony hanaovana io vavaka io avy amin'ny fahatsoram-po sy amin'ny andraikitra feno amin'ny zavatra ataontsika.
Manombantombana foana ny hafa ho ambony noho ny tenantsika, araka ny tenin'Andriamanitra.
Ny vavaka amin'i San Antonio mba hiantso ahy
San Antonio Androany mankany aminao aho satria mila ny fanampianao ...
Te-hiantso ahy (ANARAN'ILAY OLONA) tapa-kevitra ny hilaza aminy ny zavatra tsapako aho raha tsy miantso izy ...
Matahotra aho sao holavina aho fa mila mahafantatra. Ianao irery no mahavita manampy ahy amin'ity raharaha San Antonio ity dia tiako hatrehana izao satria mila fantatro raha hamaly aho Ary raha tsy izany aho dia afaka mijery ny faravodilanitra vaovao ...
Ity antso ity dia midika betsaka amiko.Noho izany, mila manao izany amin'ny fotoana haingana araka izay azo atao aho.Matahotra aho nefa fantatro fa afaka handresy azy aho. Amena.
Ara-dalàna ny fangatahana antso.
Mety maro ny tanjona azon'ity antso ity, ohatra, dia ny hahatongavana famelan-keloka ilaina handrosoana, ny fahafantarana fotsiny hoe ahoana ny toeran'ilay olona hafa, mba hampitana fa mbola eo foana izy amin'ny fotoana rehetra, na fohy, amin'ny zavatra maro.
Ny tena mahagaga dia ny fangatahana mijanona ho mitovy: antsoy aho.
Raha tsara, dia anontanio ihany, tsotra izany. Tsy misy henatra na tahotra fa miaraka amin'ny mazava kokoa sy finiavana amin'ny fahazoana an'io serasera io izay irintsika ela indrindra.
Mahery be daholo izy ireo ka raha atao am-bavaka ihany izy ireo ho an'ny olona mitovy dia hanana hery be izy ireo.
Mivavaha foana amin'ny finoana, ny fangatahana niantso ahy ao anatin'ny 10 minitra ary tena faly amin'ny fitiavana!
Vavaka am-bavahady any Saint-cipianian